tọrọ ntọala : 1878
Echefukwala discuss Siberian State Medical University
Siberian State Medical University azụ ndị na-dọkịta site n'ịrụ elu àgwà nchọpụta ọgwụ na na site na àjà magburu onwe agụmakwụkwọ.
guzosie ike 1878, Siberian State Medical University bụ otu n'ime ndị kasị mma-mara na ukwuu reputable ọgwụ ụlọ akwụkwọ na Russia oto ke mme ya n'elu caliber agụmakwụkwọ na nkà mmụta sayensị na aru, na ahụmahụ ndị dibịa ndi aha-ụwa a ma ama. N'etiti ndị na-agụsị akwụkwọ nwere abụọ isi nke Russian Academy of Medical Sciences, 25 -akpakọrịta òtù nke Russian Academy of Medical Sciences, 42 academicians.
Siberian State Medical University’s isi ozi bụ na-enwe ọganihu ndidi-elekọta ma na ahụ ike ọha na Russian Federation site ozizi, nnyocha na-adakarị mma.
The University Aims na melite àgwà ndụ na ike nke ndị bi na site ọhụrụ na-akụziri, nnyocha na-enwe ndidi-elekọta àjà n'elu-àgwà ọzụzụ, muta na nnyocha ohere ka ụmụ akwụkwọ.
karịrị 5000 ụmụ akwụkwọ
ụmụ akwụkwọ si 47 n'ógbè Russia
ụmụ akwụkwọ si 13 mba ọzọ
80% ụmụ akwụkwọ si n'ebe niile Russia
12% mba ọzọ ụmụ akwụkwọ
n'elu 80% nke agụmakwụkwọ ngalaba na-na nkà mmụta sayensị ndị ọkà mmụta
15% -arụrụ ọrụ-nkwado mmụta, inc. 30% n'ihi na Tomsk ahuike usoro
72 000 ụmụ akwụkwọ mahadum nke 120 mba na Tomsk
Siberian State Medical University na-họọrọ na n'elu 3 ọgwụ na ahụ ike n'ụlọ akwụkwọ na na top 30 elu agụmakwụkwọ njikọ n'elu 30 elu agụmakwụkwọ njikọ nke Russian Federation (2015).
kwa afọ SSMU -enye ọzụzụ ka N'ime 5 000 ụmụ akwụkwọ si n'akụkụ nile nke Russia na CIS mpaghara nakwa dị ka ọtụtụ mba ọzọ (Germany, Haiti, Latvia, Lithuania, Cyprus, Nigeria, Malaysia, India, Mongolia). The University nwere ike ịnya isi nke n'elu 80% agụmakwụkwọ ngalaba na agụmakwụkwọ degrees (375 MDs, DMedSci). N'ime 60 000 dọkịta na ndị pharmacists na gụsịrị akwụkwọ na University karịrị afọ; n'elu 40 000 Ọkachamara nwere beencertified.
SSMU -enye ụmụ akwụkwọ na exellent mmụta na a nti ọgwụ ogo.
Siberian State Medical University na-enye ihe ahụkebe izi gburugburu ebe obibi maka ụmụ akwụkwọ nwere mmasi ọrụ na ahụike, dị ka dọkịta ma ọ bụ ndị ọkà mmụta sayensị ịgagharị adakarị nnyocha na research.
Siberian State Medical University bụ otu n'ime ọgwụ ole na ole mahadum na Russia na ya ọgwụ mahadum, research emmepe na laboratories, anatomical ngosi ihe mgbe ochie na pụrụ iche collections, ndị kasị ibu Scientific Medical Library ke Siberia na ọtụtụ ndị ọzọ ụlọ ọrụ.
SSMU agụsị akwụkwọ na-ukwuu ruru eru ọkachamara.
The ihe ọmụma nweela n'oge ọmụmụ na-etinye na otu nke abụọ European accredited ọzụzụ ịme anwansị emmepe na Russia. n'etiti SSMU -agụsị akwụkwọ bụ ndị na-eduga dọkịta nke Russian na mba ọzọ clinics: karịrị 700 dọkịta, 42 academicians, Minister of Health nke Russian Federation, Deputy Minister of Education nke Russian Federation.
Akwụkwọ na mahadum dị elu ina na mba ahụ. Anyị na-agụsị akwụkwọ na-arụ ọrụ niile n'ógbè Russia, CIS, Germany, Norway, Israel, na USA, Canada, France, Belgium, South Korea, Sweden, na Czech Republic.
-amụ na SSMU bụ na-akpali ma na-emekọ.
Siberian State Medical University awade ọtụtụ ohere maka ndị chọrọ jupụta ha na-amụrụ ndụ dị iche iche na-eme. Mmụta nwere ike isonye na niile n'afọ ntụrụndụ, gụnyere football, tennis, basketball, na-egwu mmiri na ọkọchị, ma ọ bụ ski na iji atụrụ na oyi.
A ọnụ ọgụgụ nke mmasị dabeere na klọb na-amụrụ òtù dị na Mahadum: a na-amụrụ na nkà mmụta sayensị mmadụ, afọ ofufo klọb, English na-ekwu okwu club, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Medical Doctors (ọgwụ, ịwa, obstetric and gynecology)
Medicine–Biology (n'ihi mmiri ọgwụ, biophysics, medical cybernetics)
Founded more than 135 afọ ndị gara aga, the university was originally formed as a research and educational center. N'ime afọ, the University has become one of the best educational, scientific and medical complexes in Russia for training and certification of healthcare professionals in the field of surgery, internal medicine, ọrịa ụmụaka, pathology, histology, pharmacology, microbiology and many others.
SSMU today includes 7 ikike iche, Medical and Pharmaceutical College, Central Research Laboratory, 8 research emmepe, interdisciplinary teaching and research laboratories and its own clinics, three anatomic Museums with unique collections and the region’s largest scientific medical library.
N'ihi na ọtụtụ afọ Siberian State Medical University has been among the top five leading medical universities in Russia according to the Ministry of Education of the Russian Federation. The university enrolls more than 5000 ndị mmadụ kwa afọ. From year to year there is a steady increase in the number of students coming to study in the Siberian State Medical University from other regions of Russia, CIS and from abroad
Ị chọrọ discuss Siberian State Medical University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
photos: Siberian State Medical University ukara Facebook